अनैतिक पूर्वहरुको राष्ट्रघाती हर्कत - Narayanionline.com
अनैतिक पूर्वहरुको राष्ट्रघाती हर्कत
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुद्ध अहिले चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको छ । ओलीलाई सत्ताच्यूत गरेर भारीय कम्फटेबल सरकार बनाउन सकिन्छ की भन्ने अभिप्रायले उनीहरु एक ठाउँमा छन् । अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ की भनेर बिन्तीपत्र हालेर बसेका छन् । जुन आफैमा असंसदीय छ । कही नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेको जस्तो कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर रिट हालेको यो नै संसदीय इतिहासमा कहिल्यै नभएको दृष्टान्त उनीहरुले पेस गरेका छन् । अझै त्यसमा पनि आफूलाई प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको पहरेदार भएको ठान्ने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै मूख्यकर्ता बनेका छन् । अझै रोचक कुरा के छ भने, संसदीय व्यवस्थामा अरु दलका सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा बहुमत पुग्यो भनेर दाबी गर्नु आँफैमा लज्जास्पद र हास्यास्पद मात्रै छैन, लोकतन्त्रको न्यूनतम् चरित्र भित्र पनि पर्दैन । कांग्रेस सत्ताका लागि कतिसम्म नांगो हुन्छ भन्ने कुरा यहीबाट पनि थाहा हुन्छ । भोली कांग्रेसका केही सांसदको हस्ताक्षर गराएर कसैले बहुमत जुटाए भने कांग्रेसले के गर्छ ? यो पटक्कै सुहाउने कुरा हैन ।
किन ओलीमाथि घेराबन्दी थालियो ?
भारतीय कठोर हस्तक्षप (नाकाबन्दी) कै बीचमा ओलीले सत्ताको काँडे कुर्सीमा बस्नु परेको थियो । वर्षौ देखि नेपालमाथि भएको विदेशी हस्तक्षपको विरुद्ध ओलीले भारतसँग सिधासिधा लडाइ लडेकै हुन् ।
पछिल्लो समय ओलीले संसद भवनबाट भारतलाई हाम्रो सार्वभौमिकता भारतको समान छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियत बराबर छ, राष्ट्रियता उत्तिकै महत्वको छ भनेर पाठ पढाए । ६२ वर्षदेखि भारतले हडपेको भूमिको नक्सा सार्वजनिक गरे । १९५० देखिको असमान सन्धि पुनरावलोकनको लागि अध्ययन समिति बनाए । छलफल चलाए । पूर्वप्रधानमन्त्रीले बेचेर खाएको करिब १८५ रोपनी भन्दा बढी जग्गा ओलीले फिर्ता गराए । देशभरबाट व्यक्तिले हडपेका ६ हजार बिघा बढी सरकारी जमिन फिर्ता गरेर राज्यको अधिनमा ल्याए । धरहरा, रानीपोखरी, दरबार हाइस्कुल, भूमरीले उडाएको बाराको सात सय घर, भूकम्पले भत्काएको ८ लाख भन्दा बढी घर मठमन्दिर देवल, स्कुल, सार्वजनिक भवन निर्माण ओलीकै तीन वर्षे अवधिमा सम्पन्न भए । विराटनगरमा वर्षोदेखि रहेको भारतीय फिल्ड कार्यालय ओलीकै पालामा हट्यो ।
राष्ट्रिय महत्वका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक, भेरी बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना ओली कै पालामा बन्दैछ । महेन्द्र राजमार्ग चार र छ लेन बन्दैछ । मध्यपहाडी राजमार्ग, वर्षौदेखि अलपत्र तराइँको हुलाकी राजमार्ग बन्न ओली नै चाहियो । विभिन्न जिल्लामा नयाँ एयरपोर्ट निर्माण, भएका एयरपोर्टको स्तरोन्नति सबै ओली कै पालामा भए ।
महेन्द्र राजमार्गबाट दक्षिणमा रहेका शहर तथा जिल्ला सदरमुकाम वा बोर्डरसम्म आधुनिक सुविधासम्पन्न राजमार्ग बनाउन ओली नै चाहियो । नयाँ हाईड्रोपावर निर्माणदेखि विद्युत् प्रसारण लाइनको बिस्तार ओलीकै पालामा भए । ३० वर्षदेखिको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनाको पानी काठमाडौ प्रवेश गर्न ओली नै चाहियो ।
यी र यस्ता हजारौं काम गरेर जनताको समृद्ध बन्ने चाहना पूरा गर्ने मार्गमा लागेको ओलीको विकासका काम देश खोलिएका दक्षिणीको लगानी रहेका ठूला मिडिया र नेताको भजन गाउन खोलिएका दलाल अनलाइन मिडियाले देखेनन् । ओली र एमालेको विरुद्धमा नक्कली समाचार बनाउने कारखाना नै खोले, गलत अफवाह फैलाए, घेराबन्दी गरे, अरु त ठिकै थियो खैर यस्ता बिकाउ दलालहरु देशका नेता रहुन्जेल अविकास मै रहुँला ।
तर हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधिनता जस्तो गम्भीर विषयमा हस्तक्षप गरिदेउ भनेर विदेशी गुहार्ने, भारतीय हस्तक्षेपलाई हरेक हिसाबले आमन्त्रण गर्ने र उसकै हितमा सरकार बनाउन पर्छ भन्ने, नक्सा निकाल्नु नेपालले अपराध गर्यो भन्दै दिल्लीमा बिन्ती बिसाउने जस्ता कार्य गर्ने नेता र तिनका पछि लाग्ने केही राष्ट्रघाती चिलिमे हुक्केहरु समेत उफ्रिदै देशलाई विदेशीको जिम्मा लगाउने ठाउँमा पु¥याउन सम्पूर्ण तागत प्रयोग गर्दैछन् ।
अघिल्लो वर्ष शिक्षामन्त्रीज्युको आदेशमा बाडेको झण्डै तीन सय वर्गमिटर हाम्रो कालापानी क्षेत्रको जमिन नै छोडेर नक्सा प्रकाशन गरियो । पाठ्यपुस्तक बजारमा जाँदैछ , केही भारतीय दलाल र तिनका मतियार उक्त चुच्चे नक्सा नभएको पुरानो पुस्तक बिक्री गर्दैछन् । त्यसमा पनि सरकारले कडा प्रतिबन्ध मात्र होइन बिक्री गरे कारबाही नै हुने घोषणा गरिसक्यो । भारतलाई रिझाएर सत्ता सवार हुन सकिन्छ कि भनी अरु नेता ओलीको राष्ट्वाद नक्कली हो भन्दै कराउदैँ गर्छन् । ओली राष्ट्रिय स्वाधिनता र समृद्धिको यात्रामा अबिचलित, अकन्टक अगाडि बढ्दैछन् ।
पाँच पुर्वप्रधानमन्त्री भनेर सरकारको बिरुद्धमा जुन विज्ञप्ति निकालियो यो विज्ञप्ति नै राष्ट्घाती छ । आफूहरु पाँचै जना आ आफ्नो पालामा प्रम भएका ब्यक्ति होइनन् ? तितीहरुले आफ्नो पालामा राष्ट्रियता र समृद्धिको विषयमा के काम गरे ? जब आफ्नो पालामा मैले यो गरे भनेर भन्न लायक एउटा पनि काम नगरेका देशघाती जनता मारा पूर्वहरुले आज निर्वाचित सरकारलाई असयोग गर भनेर राज्यका तमाम निकायलाई धम्किदिने कार्य गर्न मिल्छ ? यस्तो कार्य घोर निन्दनीय मात्र होइन इतिहासले धिक्कार्ने राष्टघाती कदम समेत हो ।
राज्य सञ्चालनको प्रणाली हुन्छ । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबै निकाय र प्रणालीले काम गरेको छन् । ९९ दिनमा सरकार फेर्ने बानी लागेकाहरु आफू प्रम बन्न पाइन भनेर सडकमा लाजमर्दो अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन थालेको वर्ष दिन बढी भयो ।
के यो देश पूर्वहरुले चलाउने हो ? सबैले अवसर पाएर पुर्व भएका होइन ? आज पनि राज्यबाट लिइरहेका छन् । अवसर पाउँदा के गरे ? केही गरेको भए पुस्तक, लेख लेखेर आउँदो पुस्ताको लागि प्रेरणा बन्नु नि ।
निर्वाचन आयोगमा निकम्मा पूर्वहरुको जबर्जस्ती, न्यायालयमा असक्षम पूर्वहरुको जबर्जस्ती र बरिष्ट अराजकता,राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुर्वहरु कै गुण्डागर्दी, हरेक निकायमा पूर्वहरुको यस्तो किसिमको अराजकता र गुण्डागर्दी राज्य आतंक बन्द गर ।
(लेखक पाठक बार एशोसिएशन चितवनका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)
जनैपूर्णिमा र क्‍वाटी खाने परम्परा
प्रधानमन्त्री देउवा भाग्यमानी त भए अब सक्षम बनून्
चर्काे भाषण मात्र होइन, विपीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमानै अवलम्वन गरौं
बाग्लुङमा अझै स्थापना हुन सकेन पिसिआर प्रयोगशाला
अन्तर महिला हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा शिव टोल विकास संस्थाले जित्यो
कर्णालीका सबै नागरिकलाई कोरोना खोपको व्यवस्था हुन्छ’
धरान ७ को वडाध्यक्षमा एक मतले नेकपा विजयी
कोरोना मत्थर हुँदै गएपछि राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या बढ्दो
चितवनमा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट महिलाको मृत्यु
तनहुँमा फेरि सुरु भयो मतदाता नामावली सङ्कलन
नेपालमा थप ६०८५ जनामा कोरोना संक्रमण, ८६९८ जना निको, ६८ जनाको मृत्यु